Ọtụtụ mba na-emetọ ụwa | Network Meteorology
Mmetọ ya na ọkwa zuru ụwa ọnụ bụ ezigbo nsogbu nke a ga - emerịrị site na ala elu. Mgbe anyị na-ekwu maka mmetọ nke mba abụọ mebere, anyị na-ekwu ọkachasị gbasara mmetọ ikuku. Ọ bụ ezie na e nwere ụdị mmetọ dị iche iche, mmetọ ikuku bụ nke na-ebute oke nsonaazụ na mbara ụwa dịka okpomoku ụwa na mgbanwe ihu igwe. Na ọtụtụ mba na-emetọ ụwa Ha bụ ndị ahụ dịịrị maka ọnụọgụ ikuku gas na-emetọ ikuku.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a ịgwa gị mba ndị kachasị emetọ emetọ n'ụwa na ihe bụ isi kpatara mmetọ a.
1 Ikuku ikuku
3 Ọtụtụ mba na-emetọ ụwa
Nke a bụ nsogbu na-abụghịzi naanị maka ọdịmma gburugburu ebe obibi. Kemgbe ọtụtụ afọ ọ ghọrọ isiokwu nke so na ndụ onye ọ bụla kwa ụbọchị. Mmetọ ikuku bụ ihe metụtara ụwa niile na azịza ya adịghị n'aka gọọmentị ma ọ bụ mba dị iche iche, kama, onye obula puru itinye oke aja iji nwe ike kwusi ihe ndia. Ihe akaebe doro anya nke mmetọ ikuku bụ igwe ojii ndị a ma ama nke mmetọ na-agbakọta gburugburu obodo ukwu ma na-emerụ ahụ ike.
E nwere ụdị mmetọ ikuku ndị ọzọ na-adịghị achọpụta ma ọ bụ ndị a na-ahụ anya, mana ha nwekwara nsonazụ na-egbu egbu maka ahụike nke ndị dị ndụ na usoro okike. Ihe mmetọ ndị a na-eme ka okpomoku na ụwa na-ebute ọdachi. N'ime mmalite nke anyị nwere mmetọ ikuku anyị na-ahụ na, n'ime ọtụtụ puku afọ nke ndụ na mbara ala a, emepụtala anwuru na-egbu egbu.
Anwuru anwuru bụ akụkụ nke ndụ okirikiri, mana n'ọtụtụ okike. Nke ahụ bụ ịsị, mmetọ anaghị emetụta ihe mejupụtara ma ọ bụ nhazi nke gburugburu ebe obibi n'ihi na ọ na-apụta n'onwe ya. Ọ bụ akụkụ nke okirikiri ma ọ bụghị site na ọrụ mmadụ. Ihe ndị a na-agụnye gas ndị a na-ewepụta n'oge mgbawa ugwu, ma mmetụta ha adịghị adịgide adịgide. Agbanyeghị, na mbata mgbanwe mmepụta ihe nke mmadụ na ịrị elu nke ọnụọgụgụ mmadụ, anyị na-ahụ panorama nke mmetọ ikuku na ọkwa ụwa.
Mmetọ ọ bụla nke ikuku na-ezo aka na ọnụnọ nke ihe ndị na-egbu egbu nke sitere na ọrụ mmadụ.
Dị ka anyị maara, nsonaazụ nke mmetọ ikuku buru ibu buru ibu. Onye mbu nke mbu bu mmụba na njọ nke ọrịa iku ume na ọrịa obi nke ndị mmadụ bi na obodo ndị mebiri emebi. Enwekwara ebe dị nso na nso nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ ndị na-ebute ngwaahịa ndị a na-egbu egbu na mbara igwe. N'ebe ndị a niile, ọrịa iku ume na ọrịa obi na-abawanye n'ọtụtụ buru ibu.
A na-eme atụmatụ na ihe dịka 3% nke nnabata ụlọ ọgwụ niile A na - emepụta ya site na njo nke ọrịa ndị metụtara oke mmetọ na ikuku. Mba ndị kachasị emetọ emetọ n'ụwa bụ ebe enwere nnukwu ikuku gas ndị a, yabụ, enwere nsonaazụ ka ukwuu maka ahụike.
Mmetụta ọzọ dị njọ nke mmetọ ikuku bụ mmetụta griinụ a maara nke ọma. Anyi aghaghi imeghari ihe griin haus dika uto ya. Nsogbu a abụghị na enwere mmetụta griin haus (na-enweghị ya, ndụ agaghị adị ka anyị si mara ya), mana na ọ na - abawanye nsonazụ n'ihi gas ndị a. Offọdụ n'ime nsogbu ndị sitere na mmetọ ikuku bụ mbibi nke usoro okike, na-enwe mmetụta na mpaghara buru ibu, ịrị elu nke oke osimiri, mmiri na-apụ n'anya, mmụba nke ụmụ ahụhụ, mkpochapụ nke ụdị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Anyị maara na kwa afọ ihe karịrị 36.000 nde tọn CO2 ka a na-agbanye na mbara igwe. Ọ bụ gas na-eme ka ikuku griinụ na-enye aka na mgbanwe ihu igwe. Uteszọ nke ikuku nke mmanụ a bụ tumadi n'ihi mmetọ ọrụ mmadụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ole na ole n'ime mba ndị kachasị emetọ emetọ n'ụwa nwere ikike ịtọpụ pere mpe gas ndị a. Enwere ike ịsị na mba ndị kachasị emetọ emetọ na afọ ndị na-adịbeghị anya bụ China, United States, India, Russia na Japan.
Mgbe anyị na-ekwu maka ikuku anwuru CO2, anyị na-ezo aka na ya dị ka nnukwu gas, kamakwa dị ka oke. Mgbe anyị maraworị ihe ndị emetụtara na CO2, anyị nwere ike ịmaraworị akara ụkwụ Carbon nke steeti ọ bụla, ọ bụ ezie na ihe ọ na-eweta dị ka mmetọ adịghị, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ihe niile ma ọ bụ naanị Dioxide.
Ọ bụrụ na anyị enweghị echiche, anyị ga-amarịrị na ọkwa mmetọ ugbu a emebeghị maka opekata mpe afọ 3 mgbe enweghị mmadụ na mbara ụwa. Okwesiri iburu n’uche na, n’oge ahụ, ụwa nọ n’oge ọ na-arụsi ọrụ ike.
Site na data nke enwere ike inweta, anyị na-ahụ na China bụ maka 30% nke ihe ọkụkụ niile n'ụwa, mgbe na United States ọ bụ maka 14%. Ka anyị nyochaa nke bụ ogo nke mba kachasị emetọ n'ụwa:
China, nke nwere ihe karịrị 10.065 nde tọn CO2 emit
United States, jiri 5.416 nde tọn CO2
India, nwere nde tọn 2.654 nke CO2
Russia, nke nwere 1.711 nde tọn CO2
Japan, 1.162 nde tọn CO2
Saudi Arabia, 621 nde tọn CO2
Indonesia, nde tọn 615 nke CO2
Agbanyeghị na ọtụtụ ogo ahụ ka dị otu n'ihe gbasara 2018, ọ pụtara na Canada ahapụla ịhapụ nọmba 10 na Indonesia, otu n'ime mba ndị na-emepe emepe nke na-ahụ mmụba kachasị na nsị.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mba kachasị emetọ ụwa na nsonaazụ ọjọọ nke mmetọ ikuku na ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọtụtụ mba na-emetọ ụwa
Mbara ala na yiri mgbaaka